galmudugnews.com » Wariyaha Channel4 UK oo laaluush ka qaatay Dahabshiil
Home » QORMOOYIN, WARARKA » Wariyaha Channel4 UK oo laaluush ka qaatay Dahabshiil Wariyaha Channel4 UK oo laaluush ka qaatay Dahabshiil admin on
Jun 26th, 2013 //
No Comment Views 167973
Galmudugnews.com – Wariye Jamal Osman oo sanadkii hore qoray Warbixin uu ku sheegay in Wariyeyaasha Soomaaliyeed laaluush ku shaqeeyaan ayaa todobaadkaan Channel4 Tv ka sii daayay warbixin uu iidheh ugu sameeyay Shirkadda Dahabshiil.
Warbixinta Jamaal Osman waxay aheyd iidheh iyo buun buunin uu si gaara ugu sameeyay Dahabshiil maxaa yeelay waxaa dalka Ingiriiska ku yaal Xawaalada ugu weyn Somalida ee Kaah Express iyo Xawaalado badan sida Iftin Express,Amal Express,Olympic ,Muna,Sahal iyo Hodan Global Express ,hadana marnaba Warbixintiisa kuma soo hadal qaadin. Halkaan ka daawo
Kaah Express oo ah Xawaalada Horyaalka Xawaaladaha Somalida wax saameeyna kuma yeelan xanibaada Barclays Bank maxaa yeelay waxba lagama xanibin.
“Amaanta Jamaal Osman ee Dahabshiil uu ku sheegay Shirkad Reliable ah ,wuxuu ku dilay sumcadiisa Suxufinimo,waxaana hubaala inuu qaatay laaluushka Somalia looga yaqaan SHARUUR” sidaasi waxaa yiri Gudoomiyaha ururka Suxufiyiinta Somalia Mr Dahir Alasow,oo sidoo kalena ah Wariye wax baara oo sedex jeer ay Maxkamad ku taal Netherland is hor fariisteen Dahabshiil Money Transfer.
Dahir Alasow wuxuu tibaaxay in Dahabshiil maalgeliso argagixisada ,isagoo xusay inuu cadeeymo buuxa horgeeyay Maxkamadda sare ee Magaalada Denbosch dalka Holland.
“Maamulaha Dahabshiil wuxuu laaluush siinayaa dhamaan Wariyeyaasha Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiya si ay uga been sheegaan xaqiiqada laakiin runtu waxay tahay inaan Xawaaladaha maalgeliya argagixisada sida Dahabshiil loo baahneen,waxaana mahadcelin balaaran mudan Barclays Bank iyo dhamaan cid kasta oo ka qeybqaadata sidii loo xanibi lahaa ganacsatada dhaqaalaha siiya argagixisada” ayuu yiri Dahir Alasow.
Maxkamadda Gobolka Minnesota ayaa Dahabshiil ku cadeeysatay inay lacago Sharci daro ugu xawishay laba dumara oo Somalia ,sidoo kalena Wikileaks ayaa sii daayay dukumiinti Cadeeynaya in Wakiilkii Dahabshiil ee Pakistan Mohamed Suleyman lagu xiray Gauntanamo Bay maadama uu Xawaalada Dahabshiil marsiiyay lacagahii lagu qarxiyay Hotel Paradise Mombasa Kenya.
Qurba joogta Somalida ayaa aad ugu faraxday go-aanka Barclays Bank ku xanibay accounts-ka Dahabshiil Money Transfer oo ka mida Shirkadaha maalgeliya argagixisada xasuuqa baahsan ka wada gudaha Somalia.
Somalida isticmaasha Facebook iyo Twitter waxay %65 ku qoreen “ Dadkeena waxaan lacagaha ugu dirsan karnaa Xawaaladaha wanaagsan ee argagixisada aan taageerin sidaas darteed waxaan hambalyo iyo mahadnaq u direeynaa Barclays Bank ,oo xiriirka u jaray Dahabshiil Money Transfer”
Somalida ku hadlayay Facebook iyo Twitter oo u badan kuwa jooga gudaha Somalia waxay saxiixeen Petition ay ku dalbanayaan in la xiro Shirkadda Dahabshiil.
“Intii aan lacag ku dirsan laheyn Shirkadaha taageera argagixisada ,waxaan ku faraxsanahay in la xiro” ayey Somalida badankood yiraahdeen.
Codeeyn ka socota Internet-ka ayey dad gaaraya boqol qof ku dalbadeen in la xiro Dahabshiil,Halkaan ka daawo ama ka download gareeyso
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139495 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31883 hitsContact US - 30588 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26150 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25641 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25272 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23899 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23039 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22368 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22368 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21460 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21119 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21113 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20812 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19877 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19874 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19264 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18507 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17818 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17737 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17681 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16904 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16823 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15536 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15478 hits Home Contact US